Archive du 20191105
Antananarivo Renivohitra Hafana ny fifandonan’i Rina sy Naina
Raikitra izany ny propagandy. Hifamoivoy manerana an’i Madagasikara indray ny kandida avy amina antoko politika.
Propagandy Mila mahay mihaino sy mandinika ny olom-pirenena
Vato misakana amin’ ny fampandrosoana eny anivon’ ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ny fahadisoam-panantenana teo amin’ ireo mpifidy manoloana ireo endrika ratsin’ ireo olona voafidy.
Olon’ny TIM teo aloha Nisy nifindra lasy
Nanaitra ny maro omaly ny nahita ny fijoroan’ny vovonana politika antsoina hoe “CREER” izay milaza ho mandalina ny fifohazan-tsaina sy fanantenana ary fahateraham-baovao no sady ivondronan’ireo solombavambahoaka teo aloha toa an-dry Felix Randriamandimbisoa sy Mamy Rajhonson,
Fanoloana ireo sefo fokontany Tsy misy idiran’ny Ceni
Mbola ireo lisi-pifidinana tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo,
Pejy facebook 24h Mada Tsy hamoaka vaovao intsony
“Noho ny olana ara-teknika misy eto amin’ny pejy dia tsy hisy ny famoahana ny vaovao eto amin’ny pejy 24h Mada mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ialana tsiny indrindra amin’ny mpanaraka ».
Fandikan-dalàna amin’ny propagandy Hiafara amin'ny fanafoanana vato
Manomboka anio tamin'ny 6 ora maraina ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana kaominaly sy monisipaly ary hifarana amin'ny 25 novambra izao amin'ny 12 ora alina.
Boriborintany faharoa Mahavita kopia 300 isan’andro
Ny alarobia lasa teo, dia kopia faobe manodidina ny 250 ka hatramin’ny 300 no vita iray andro ho fanamaivanana ireo mponina sy ny ray aman-dreny,
Fandehanana amin’ny fiaramanidina Mila fahamailoana ny fitondrana entan’olona
Mila fahamailoana sy fitandremana ny entana hoentina rehefa handeha fiaramanidina eto Madagasikara. Maro ny olona velon-taraina fa efa tratra am-pitaka. Tahaka izao no fitrangany :
Fiarovana ny ranomasimbe indianina Manohana hatrany ny Amerikanina
Mampiantrano ny « forum sur la sécurité maritime » i Madagasikara nanasana ireo firenena manodidina toy ny Nosy Maorisy, Seychelles,
Open International BMOI-Madauto Hitarafana ny fahaizan’ny Malagasy Tenisy
Hisy ny lalao tenisy izay hokarakarain’ny Country Club Ilafy (Open International BMOI-Madauto) manomboka ny 5 hatramin’ny 10 novambra izay hatao eo ambany fiahin’ny Ligin’ny Tenisy Analamanga.
Ekipan’ny Fosa Juniors Fc Rendrika fanindroany indray
Taorian’ny nihintsanany teo amin’ny sehatry ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny ekipa tompondaka, tamin’ny faha-29 septambra 2019 teo tany amin’ny kianja Fréderic Kibasa Maliba
Kitra Pro League Malagasy Mbola resy tao an-jaridainany indray ny Zanakala Fc
Tontosa tamin’ny sabotsy 2 sy omaly alahady 3 novambra 2019 ny andro faha-2 amin’ny fifaninanana baolina kitra “Pro League Malagasy”. Nisongadina ny mbola naharesy an-taniny indray ny ekipan’ny Zanakala Fc Matsiatra Ambony raha nihaona tamin’ny CNaPS Sport Itasy.
Raikitra indray ! Raikitra indray ity ny propagandy ! Asa indray aloha izay ho
fitrangany ato anatin’izao 20 andro handresen’ireo kandida ho ben’ny tanàna sy mpanolotsain’ny tanàna lahatra ireo tiany
Mpampianatra FRAM 70.000 ireo mbola karamain’ny ray aman-drenin’ny mpianatra
Misedra olana tanteraka ireo ray aman-drenin’ny mpianatra eny anivon’ny sekolim-panjakana ankehitriny.
Tontolon’ny zavakanto Mifarana hatreo ny tarika Mahaleo
Telo sisa ireo mpikambana ao amin’ny tarika Mahaleo ankehitriny. Taorian’ny nahalasanan-dRaoul, Nono, Fafah ary Dadah mantsy dia Bekoto sy Dama ary Charles sisa no tavela.
CCHA Namoaka ny andiany « Maharitra »
Sady fampahafantarana no fisehoana ampahibemaso. Toy ny isan-taona, nanpolotra seho an-tsehatra niavaka, hanehoan` ny mpianatra ny talentany sy ny fahaizana notovozin` izy ireo nandritra ny taom-pianarana ny Cours de Clavier Hery Andriatahina (CCHA).
ZAITRA Mitombo isa ireo mivelona aminy
Mitombo isa hatrany ireo olona mivelona amin’ny asa tenany toy ny zaitra eto amintsika.
Disadisam-piarahamonina Niafara tany amin’ny fitsarana ilay fety mariazy
Ny fitsarana no handray an-tanana ny tohin’ny adin’ny fianakaviana avy amin’ny lehilahy an-kilany ary ny ankohonan-drazazavavy an-daniny.
Fanafihan-jiolahy mitam-piadiana “Ody Bala sy fiarovantenan’ny dahalo ny ody gasy”
Nandritra ny tafa manokan’ny mpanao gazetinay tamin’ny komanda Roland Zakatiana,
ANALAVORY Ganagana iray namoizana aina
Niakatra fampanoavana omaly ireo telolahy voarohirohy tamin’ny famonoana mpangalatra ganagana iray.
Fieren-jiolahy ao toamasina Mpiloka 20 voasambotra …
Nanatanteraka bemidina tao amin’ny tanànan’i Tanambao-Verrerie ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria Tanambao-II, Toamasina ny alakamisy 31 oktobra.